A Glimpse of My Life: December 2009
ဒီ သီချင်းလေးက မျက်စိမှိတ်ပြီးယုံ အခွေထဲက သီချင်းလေးပါ။ ချမ်းချမ်းကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်မတော့ ကြားကြားချင်း ဒီသီချင်းလေးကို ကြိုက်သွားတယ်။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်.. ဒီသီချင်းရဲ့ မူရင်းက Jolin Tsai ရဲ့ Sky ဆိုတဲ့ သီချင်းတဲ့။ ဒါကြောင့် Sky သီချင်းကိုလည်း နားထောင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲ မသိ.. ချမ်းချမ်း အသံကို ပိုကြိုက်နေမိတယ်။ :D
သူမလိုရင် မင်းအတွက် အသင့်ပဲ
ယုံကြည်ပါ အခုထိ ချစ်ဆဲ
(အချစ်ဆုံး မင်းအနားမှာ ရှိခွင့်ပေးပါနောက်ဆုံး
အရင်လို မချစ်တော့ရင် သွားပါ့မယ် မမုန်း
ရင်မှာ မင်းလေး တစ်ယောက်သာ
ငါတကယ် ရူးမတတ်အချစ်ဆုံး ဟိုတုန်းကလို
မချစ်တော့ရင် ထားခဲ့ပါ ဆက်ချစ်မယ် မမုန်း
ပျော်မယ်ဆို မင်းနဲ့ဘဝချင်းခြားတောင် ချစ်မှာ..)
အချစ်ဆုံး မင်းအနားမှာ ရှိခွင့်ပေးပါနောက်ဆုံး
Jolin Tsai - Sky
(Pinyin and Translation Credit to Chinese Music Blog)
ting zhe zi ji de xin tiao, mei you gui ze de tiao yue
Listening to my heart beating, jumping irregularily
wo an jing de zai si kao, bing bu xiang bei shei da rao
I am quietly pondering, not wanting to be disturbed by anyone
wo men ceng jin jin yong bao, que you qing yi de fang diao
We had tightly embraced, yet let go easily
na chong gan hue hen wei miao gai zen me shuo cai hao
That kind of feeling is very subtle, what is the right thing to say?
shi jian fen ge cheng dui jiao ting zhi ni dui wo de hao
Time is divided diagonally, halting your treating me well
wa jue wo men de yi kao
Disintegrate our dependence on each other
zai ni li kai zhi hou de tian kong, wo xiang feng zheng xun yi ge meng
After you left, I'm likeakite in the sky searching foradream
wo jing jing de wang zhe tian kong, shi zhe sun zhao shi luo de gan dong
Afterabout of rain, does the sky appear to be clearing up?
yu hou de tian kong, shi fou you fang qing hou de mian rong
I calmly gaze at the sky, trying to seekafeeling of loss
zhi neng yong xiao rong, qi dai zhe yu guo tian qing de cai hong
I can only useasmile to await the rainbow that follows the sky's clearing
အခ်ိန္ 12/29/2009 06:15:00 PM စာေရးသူ - အရုဏ်ဦး